China Metal To Metal Ball Seat mveliso kunye nabenzi | Ixesha elizayo
Isinyithi ihleli ibhola yevalve kunye nesihlalo yeyona ndawo ibalulekileyo yeentsimbi ezihleliyo zebhola.
Isinyithi ihleli ibhola yevalve kunye nesihlalo yeyona ndawo ibalulekileyo yeentsimbi ezihleliyo zebhola. Yenzelwe uxinzelelo oluphezulu kakhulu, ubushushu kunye neemeko ezirhabaxa, ezinje ngokusika okanye ukudibanisa iigrensi eziqinileyo, isinyibilikisi esinyibilikisiweyo, amandla amalahle, isalder cinder, amanzi omphunga okanye olunye ulwelo njl. ukutyabeka okunzima, ukuzala okupheleleyo kunye nokuncipha kwenxeba, inqaku elikhuselekileyo lomlilo elithobela i-API607, kunye nokusebenza ngokutywina okuthembekileyo.
Isihlalo seMetro kunye neBhola zenziwe ngesinyithi esisisiseko esidityaniswe rhoqo nge-chrome enzima, i-tungsten carbide, istellite kunye ne-Ni60. Sinezinto ezimbini zokuthambisa zokutshiza kunye nokutshiza okubandayo okukhoyo okunje ngeLaser Cladding, HVOF (High Velocity Oxy Flame) Ukwaleka, iOxy-acetylene ilangatye ukutshiza, inkqubo yePlasma Spray.
Ibhola kunye nokuHlala kwesihlalo
Kwibhola yentsimbi ehleliyo kunye nesihlalo, kufuneka sinikeze isisombululo sekhithi + yeebhokisi zesisombululo kubaxhasi kuba ibhola kunye nesihlalo bafuna ukukhahlela ngaphambi kokuba bathunyelwe. Kule minyaka idlulileyo, Siye saqulunqa iteknoloji yokuqhwaba ibhola ekhethekileyo kwibhola edibeneyo kunye nesihlalo. Ngokujikeleza ngaxeshanye kunye nokujikeleza ngendlela eyahlukileyo, ibhola kunye nesihlalo kukhokelela kubungqingqwa obufezekileyo kunye nokuqina, ukufezekisa "ukuvuza okuZero"
Inkcazo yeBhola yeValve ehleliweyo
I-HV 940-1100 / HRC 68-72
I-ASTM A105 (N), A350 LF2, A182 F304 (L), A182 F316 (L), A182 F6A, A182 F51, A182 F53, A564 630 (17-4PH), Monel, Alloy njl.
Chela Thermal kunye Cold Chela:
Ni60, khabhayithi khabhayithi, Chrome khabhayithi,
IStellite 6 # 12 # 20 #, Inconel, njl
Egqithileyo Uhlobo lwe-T lwendlela ezintathu zebhola QC-301
Okulandelayo: Ibhola edadayo
Isinyithi ukuya kwibhola yensimbi kunye neekiti zering
Isinyithi ukuya kwibhola yensimbi kunye nesihlalo-2